रिंगटा किन लाग्छ ? यस्तो छ कारण र घरेलु उपचार – rastriyakhabar.com
रिंगटा किन लाग्छ ? यस्तो छ कारण र घरेलु उपचार
रिँगटा लाग्दा चारैतिर वस्तु घुमेको जस्तो लाग्छ । यो एक साधारण रोग हो तर लापरबाही गर्नु हँुदैन । किनकी यो कुनै गम्भीर रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । रक्तसञ्चार र रगतमा कमी, बढी वा कम रक्तचाप, अत्याधिक शारीरिक वा मानसिक थकान, तनाव, डर र टाउको चोटलगायतका कारणले रिँगटा लाग्छ ।
बिहिबार, जेष्ठ १७, २०७५ मा प्रकाशित